सरकारसँग कांग्रेसको प्रश्न : खाडीका श्रमिक ‘बर्ग शत्रु’ हुन् प्रधानमन्त्रीज्यू ? | Samajik Khabar
Home मुख्य सरकारसँग कांग्रेसको प्रश्न : खाडीका श्रमिक ‘बर्ग शत्रु’ हुन् प्रधानमन्त्रीज्यू ?
सरकारसँग कांग्रेसको प्रश्न : खाडीका श्रमिक ‘बर्ग शत्रु’ हुन् प्रधानमन्त्रीज्यू ?
काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले विदेशमा भएकाहरुको उद्धारमा भएको ढिलाईप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
Previous articleविश्वमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ८ लाख नाघ्यो
Next articleटमाटर प्रयोग गर्नुको फाईदै फाइदा, छक्क पर्नुहुन्छ तपाईं !